Ividiyo ibonisa Ipensile ye-Apple etyholwa 3 "icwebe kakhulu" | Ndisuka mac
Inkcazo enokwenzeka entsha Apple Ipensile 3 Ngaphandle kwamathandabuzo, kunye nesimemo somsitho ngoLwesibini olandelayo, ezona ndaba zibalaseleyo evekini. Lowo unepensile enokwenzeka ube yenye yezona mfihlo zigcinwe kakuhle. Kude kube ziintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, esi sizukulwana sesithathu sepensile yeApple besingaziwa.
Kwaye namhlanje siye safumanisa, uphawu olunokwenzeka kwesi sizukulwana sesithathu. Kungcono, ubume. Ehamba ekubeni mhlophe matte wepensile ye-Apple yangoku iye kumhlophe ocwebezelayo, njengowokuqala. Yiyo kuphela into enokubonwa kwividiyo evele kwiinethiwekhi zentlalo, apho kunokwenzeka le Ipensile ye-Apple 3.
Phambi komsitho we-Apple «Intwasahlobo ilayishiwe»Eziza kwenzeka ngolwe-Lwesibini olandelayo, kuye kwavela amarhe amaninzi abonisa ukuba inguqulelo entsha yePensile ye-Apple inokuboniswa kwigama eliphambili. Kuphela kwiiyure ezimbalwa emva kokuvela kwale ngxokolo, ividiyo sele igqithile kwi-Twitter apho kwathiwa "Apple Pencil 3" ivela.
Ividiyo ithunyelwe ngumsebenzisi ongaziwayo Twitter Ibango lokuba irekhodwe kwivenkile zonikezelo zefowuni. Kwividiyo emfutshane ekuphela kwento esinokuthi siyixabise kukuba i-Apple Pencil 3 ibonakala ifana kakhulu nemodeli yesizukulwana sesibini, kodwa ngotshintsho oluphambili: ukubuyela kwisiphelo esimenyezelayo ukusuka kuhlobo lwayo lokuqala.
Ngaphandle, kuphela kukutshintsha kobume, ukusuka kwi-matte ukuya kwi-gloss
Isizukulwana sokuqala sePensile ye-Apple sibonisa uyilo oluqaqambileyo kunye neerhafu ngokudityaniswa kombane. I-Apple isathengisa isizukulwane sokuqala sePensile ye-Apple ye-iPad mini kunye nenqanaba lokungena le-9,7-intshi ye-iPad.
Nangona kunjalo, kunye iPad Pro 2018U-Apple wazisa isizukulwane sesibini se-Apple Ipensile uyilo lwe-matte kunye nokukwazi ukunxibelelana ngemagnethi kwicala le-IP Pro yokubhanqa nokutshaja. Oku kuyahambelana ne-iPad yomoya eyaziswa kunyaka ophelileyo.
Ipensile ekucingelwa ukuba yiApple 3 ibonakala ngathi iyadibanisa ezi zoyilo. Kubonakala ngathi inomphetho othe tyaba wokuyivumela ukuba idibane ngemagnethi kwi-iPad yomoya kunye nePad Pro yokutshaja, kodwa inombala omenyezelayo.
Ngokuqinisekileyo le modeli intsha ifihliwe imisebenzi emitsha ngaphakathi, kunye notshintsho kubume kuphela umahluko wangaphandle ngokubhekisele kuhlobo lwangoku. Kuya kufuneka silinde kude kube nguLwesibini ukufumanisa. Okanye hayi…
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Ividiyo ibonisa isimangalo "esikhazimla kakhulu" i-Apple Pencil 3
IMicrosoft Desktop ekude ngoku iyahambelana ngokwendalo neApple Silicon